June 22, 2019 - Book News Madagascar
Fankalazana ny faha 100 taonan’ny TEM – Atao androany ny hetsika « Tamboho »
Tanterahina androany ny hetsika “Tamboho” ataon’ny Tily eto Madagasikara eny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely. Hetsika izay entina hanomanana ny faha 100 taona sy ny fananganana ny tranombakoka ho an’ny Tily eto Madagasikara afaka 5 taona. Hetsika « Tamboho » Tsy ho ela dia hankalaza ny faha 100 taonany ny Fikambanana Tily eto Read more…
Amboaran’ny Fahaleovantena 2019 – Voahosotra ho tompondaka ny FITAFI Madagasikara
Ny Fikambanana FITAFI Madagasikara no nahazo ny amboara ny fahaleovantena ho an’ny lalao baolina kitra vehivavy. Amboaran’ny Fahaleovantena 2019 Tontosa ny alarobia faha 19 jona 2019 teny amin’ny Kianja mitafo Mahamasina ny lalao famaranana ny fiadiana ny amboara ny fahaleovantena 2019 nokarakarain’ny Ministeran’ny Tanora sy Fanatanjahantena. Taorian’ny fifanitsanana nataon’ireo fikambanana Read more…